Mustaqbalka Oracle E-Business Suite iyo Dayactirada waaweyn ee Sanadka Soo Socda
Qalabka E-ganacsiga waxay kicisaa xiisaha shirkadaha sababo sharci ah. Oracle waa horjoogaha horumarinta, xayeeysiinta iyo suuq-geynta suuq-geynta software, nidaamyada wax-qabadka daruuriga ah iyo Barnaamijyada Software Software. Ururku wuxuu sii wadaa inuu miisaamiyo Oracle E-Business Suite si uu mustaqbalka u-diyaariyo. Sanadka 2015 wuxuu goob joog u ahaa Oracle oo ku beddelay barnaamijka labaad ee ugu weyn software-ka, ka dib markii Microsoft. Ma waxaad xiiseyneysaa inaad ogaato sida uu u eegi doono oo u shaqeyn doono dhawr sano? Halkan waa sheekada oo idil, oo lagu xayeysiinayo:
Waa maxay mustaqbalka Oracle E-Business Suite?
Cusbooneysiinta ugu weyn ee Sannadaha soo socda
Doorka maamulaha E-Business Suite ee shirkadaha:
EBS ama Oracle E-Business Suite waxay bixisaa shirkado si ay u shaqeeyaan hal beer oo isku-xiran oo leh hal database. EBS waxay ka kooban tahay
SCM - Maaraynta Xeeladda.
CRM - Maaraynta Xiriirka Macaamiisha.
Maaraynta Khayraadka Bani'aadamka.
Nidaamka aasaasiga ah ee EBS waxaa lagu bilaabay 2007 illaa iyo markaas waxay ka timid meel fog. Xilligan, nooca ugu dambeeya ee Oracle wuxuu ku yaalaa 12.2.6 waxana uu doonayaa in uu u diro nooca xiga ee 2019 ama 2020 oo leh casriyeyn waaweyn.
Qeybta ugu weyn ee EBS waxaa lagu bilaabay 2007, tan iyo markaasna way ka timid. Xilligan, nooca ugu dambeeya ee Oracle wuxuu ku yaalaa 12.2.6 waxaana uu rabaa in uu u diro nooca xiga ee 2019 ama 2020 oo leh casriyeyn heer sare ah.
1. Dib-u-habeyn laba tallaabo ah
Waa in aan diyaar u nahay inaan markhaati ka nahay laba hagaajin oo dhow sii deynaya 12.2.7 iyo 12.2.8 by 2019.
2. Badbaado badan oo ammaan ah:
Oracle wuxuu isku diyaarinayaa in uu siiyo adeegyo cidhiidhi ah oo loo adeegsado ciidanka ama dowladaha kale ee aan weli ku habooneyn in ay u guuraan adeegyada daruuraha. Xogta xasaasiga ah ee ay qabtaan ururradan furan waxay u nugul yihiin hanjabaadda ka daadinta iyo Oracle waxay ku xiran tahay sii-deynta 12.3 ee EBS in loo qaadan karo 100% channel-ka nabdoon ee wareejinta xogta.
3. Future waa daruur:
Ururku wuxuu xoogga saarayaa isticmaalka SaaS (software-as-a-service) si uu ganacsigu awood ugu yeesho inuu wax ka qabto 2030. Godwin oo ka yimid Oracle ayaa soo xigtay shirkadaha, kuwaas oo u socdaalaya waqtiga EBS, waxay arki doonaan adeegga SaaS ee cusub ee lagu geliyo ururka.
Diiwaangelinta ganacsiga, maareynta ganacsiga, kharajka qarashka, warbixinta, xafididda daruuriga ah waa qaar ka mid ah qaybaha, kuwaas oo si dhaqso ah loo geeyn karo EBS. Qalabka SaaS ee La-qabsashada SaaS waxay u isticmaashaa Oracle, sidoo kale, isla markiiba taabashada saldhig si loo hubiyo hawlo wanaagsan oo hufan.
4. Analytics Sawir:
Sayniska Warfaafintu waa maalmo aad u kulul. Oracle waa injineernimo adeegyadeeda SaaS si ay u awood u yeelato Hantidhowrka Maqalka ah ee maareynta hantida ee shirkadaha. Adeegyada cusub waxaa lagu sheegi karaa inay yihiin kuwo aad u ballaaran oo kor u qaadaya barashada mashiinka.
5. Horumarinta Isgaadhsiinta:
Barnaamijka moobaylka ee moobaylku waa feejignaanta rasmiga ah ee Oracle iyo tartamayaashiisa mustaqbalka dhow. EBS waa marxalad ka mid ah in Oracle uu si joogta ah isku dayayo in uu u soo galo Mobile Apps oo markaa ka sii dareysa daruurta darbiga dhismaha.
Sidee loo abuuraa xirfadle ahaan khabiirka EBS?
Iyada oo uu Oracle soo bandhigo baaxad weyn oo ka mid ah EBS ee shirkadaha, shuruudaha aqooneed ee EBS waxay sidoo kale u malaynaysaa in ay horumariyaan xuduudaha iyo xadka. Baahida loo qabo xirfadle Oracle oo ah shahaadada shahaadada ah ayaa sare u kacda sii-deyn kasta oo cusub Haddii ay dhacdo in aad doonayso in aad mustaqbalkaaga xirfad kuugu bilawdo sida Oracle EBS khabiir, waa inaad tagtaa Shahaadada Oracle.
Maxay suurtagal tahay in Oracle EBS ay ku daboosho shahaadada?
Qaar badan oo ka mid ah ganacsiyada ayaa u guuri doona Oracle E-Business Suite. Sidaa awgeed, qiimaha iyo maaddooyinka koorasyada ee shahaadadan gaaban waxay kordhin doonaan, helitaanka fursado shaqo oo dheeraad ah iyo xirmooyinka mushaharka sareeya ee sanadka 2019 iyo 2020. Waxay noqon doontaa mid daboolaya:
Fikradaha macquulka ah ee fikradaha RDBMS iyo SQL.
Hands-on Oracle 9i ama 10g.
Adiga oo ah Maamulaha E-Business Suite waxaad u baahan tahay inaad fuliso hawlaha la socda:
Kala sooc iyo xaddid Xogta loo baahan yahay in loo xilsaaro ganacsiga
Horumarinta Hawlaha Dib-u-beddelka iyo Calaamadaha Shuruudaha ah sida ku cad shuruudaha degaanka
Macluumaadka Qodobada la adeegsado iyadoo loo adeegsanayo Shaqaalaha Kooxda EBS ee warbixinta iyo baaritaanka
Raadinta Dhismaha Daraasadda Oracle ee si buuxda u shaqaynaya
Ku rakibida Oracle EBS Software
Maareynta Macluumaadka Oracle
Maareynta Database-ka Oracle sida ku xusan shuruudaha xallinta macluumaadka
Qalabaynta iyo dib-u-hagaajinta Qalabka Backup
Oracle waxay si joogto ah u maal-galineysaa casriyeynta E-Business Suite si loo xoojiyo saddex farsamood
Casriyeynta iyo UI casriyaynta
Oracle waxa uu ku hawlanaa sahaminta suuq-galka oo lala beegsanayo ganacsiyada la beegsanayo oo wuxuu dhisayaa hagaha si buuxda oo ku saleysan shuruudaha macaamilka. Si uu macaamilka ugu raaxaysto faa'idooyinka Cloud Infrastructure iyo Codsiyada macaamiisha, una ogolow faa'iidada faa'iidada ee maalgelinta EBS, injineerkoodu si joogto ah u shaqaynaya. Dib-u-habeynta dhowaan uma shaqeyn doonto si ka badan EBS, si kastaba ha ahaatee waxaa loogu talagalay inay ku jiraan horumarinta SaaS ee ku wajahan EBS.
Waxaad sidoo kale jeclaan kartaa:Tilmaamaha dhammeystiransi loo siiyo Oracle Certification